ကိုဗစ်ရဲ့ သားကောင် ဖြစ်ဦးမယ့် နောက်ထပ် အာရှ နိုင်ငံ တစ်ခုအကြောင်း သိပြီးကြပလား? – Zartiman
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ လူအတော် များများဟာ အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်ကမ်းများကို လိုက်နာမှုမရှိကြဘဲ နှာခေါင်းစည်းများလည်း တပ်လေ့ မရှိတာကို သိရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တ ၂ပတ်ခန့်မှစပြီး ကူးစက်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့ ပြီး သေဆုံးသူ ဦးရေလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်တနိုင်ငံလုံးရှိ ဆေးရုံ များတွင်လည်း ကိုဗစ်လူနာ အသစ်ကို လက်မခံနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ကိုဗစ် လူနာသစ်ကို လုံးဝ လက်မခံတော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လော့ ဒေါင်းချတာတွေ ထပ်ပြီး မလုပ်ရင်တော့ ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ကူးစက်ခံရသူ ၈ သိန်းခန့်အထိ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ WHOက သတိပေးထားပါတယ်။
ပါကစ္စတန်တွင် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှ လော့ဒေါင်း ချခဲ့ပြီး မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် လော့ဒေါင်းအစီအစဉ်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ကူးစက်မှု အသစ် ၅၂၄၈ ခုကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ထပ်မံသေဆုံးသူ ၉၇ ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဇူလိုင်လကုန်ထိ ကူးစက်သူ ဦးရေ တစ်သန်းအထိရှိလာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တို့က ခန့်မှန်း ထား ကြပါတယ်။ လူဦးရေ သန်း ၂၂၀ ကျော် ရှိပြီး လူနေထူထပ်တဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ကိုဗစ် ကူးစက်ခြင်းခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၄၄၄၇၈ ဦးရှိကာ၊ ယင်းရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၂၇၂၉ ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယခုဇွန်လကုန်တွင် ကူးစက်ခံ ရသူဦးရေ ၂ ဆခန့်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ အဆိုပါနှုန်းအတိုင်းဆက်သွားပါက ဇူလိုင်လကုန်တွင် ကူးစက်ခံ ရသူ စုစုပေါင်း ၁.၂သန်းအထိဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တို့က ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
crd : white sone
ကိုဗဈရဲ့ သားကောငျ ဖွဈဦးမယျ့ နောကျထပျ အာရှ နိုငျငံ တဈခုအကွောငျး သိပွီးကွပလား?
ပါကစ်စတနျနိုငျငံရှိ လူအတျော မြားမြားဟာ အစိုးရကခမြှတျထားတဲ့ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးဆိုငျရာ စညျကမျးမြားကို လိုကျနာမှုမရှိကွဘဲ နှာခေါငျးစညျးမြားလညျး တပျလေ့ မရှိတာကို သိရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့ရကျသတ်တ ၂ပတျခနျ့မှစပွီး ကူးစကျမှုမြား တိုးပှားလာခဲ့ ပွီး သဆေုံးသူ ဦးရလေညျး မွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။
ပါကစ်စတနျတနိုငျငံလုံးရှိ ဆေးရုံ မြားတှငျလညျး ကိုဗဈလူနာ အသဈကို လကျမခံနိုငျတော့တဲ့ အခွအေနကေို ရောကျရှိနပေါတယျ။ ကိုဗဈ လူနာသဈကို လုံးဝ လကျမခံတော့တဲ့ အခွအေနဖွေဈနပေါတယျ။အမှနျတကယျ လိုအပျတဲ့ နရောတှမှော လော့ ဒေါငျးခတြာတှေ ထပျပွီး မလုပျရငျတော့ ဇူလိုငျလအတှငျးမှာ ကူးစကျခံရသူ ၈ သိနျးခနျ့အထိ ရှိလာနိုငျတယျလို့ WHOက သတိပေးထားပါတယျ။
ပါကစ်စတနျတှငျ ဧပွီ ၁ ရကျနမှေ့ လော့ဒေါငျး ခခြဲ့ပွီး မလေ ၂၂ ရကျနတှေ့ငျ လော့ဒေါငျးအစီအစဉျကို ပွနျလညျ ရုပျသိမျးခဲ့သောကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးက ဝဖေနျခဲ့ပါတယျ။ ပါကစ်စတနျနိုငျငံတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၄ နာရီအတှငျး ကူးစကျမှု အသဈ ၅၂၄၈ ခုကို စဈဆေး တှရှေိ့ခဲ့ပွီး၊ ထပျမံသဆေုံးသူ ၉၇ ဦးရှိခဲ့ပါတယျ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံတှငျ ဇူလိုငျလကုနျထိ ကူးစကျသူ ဦးရေ တဈသနျးအထိရှိလာနိုငျဖှယျရှိကွောငျး ကြှမျးကငျြသူပညာရှငျတို့က ခနျ့မှနျး ထား ကွပါတယျ။ လူဦးရေ သနျး ၂၂၀ ကြျော ရှိပွီး လူနထေူထပျတဲ့ ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာ လကျရှိအခြိနျအထိ ကိုဗဈ ကူးစကျခွငျးခံရသူ စုစုပေါငျး ၁၄၄၄၇၈ ဦးရှိကာ၊ ယငျးရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသူ စုစုပေါငျး ၂၇၂၉ ဦးရှိပွီဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ယခုဇှနျလကုနျတှငျ ကူးစကျခံ ရသူဦးရေ ၂ ဆခနျ့ဖွဈလာနိုငျပွီး၊ အဆိုပါနှုနျးအတိုငျးဆကျသှားပါက ဇူလိုငျလကုနျတှငျ ကူးစကျခံ ရသူ စုစုပေါငျး ၁.၂သနျးအထိဖွဈလာနိုငျကွောငျး ကြှမျးကငျြသူ ပညာရှငျတို့က ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။